Hay`adda ICRC Oo Ka Hadashay Afduub Loo Geystay Mid ka mid ah Shaqaalahooda - Horn Cable TV
Hay`adda ICRC Oo Ka Hadashay Afduub Loo Geystay Mid ka mid ah Shaqaalahooda
0	May 3, 2018 10:20 am
Hay’adda Laanqeerta cas ee ICRC ayaa ka hadashay mid kamid ah shaqaalahooda ajanabiga ah ee soomaaliya ka howgala xalay laga afduubtay magaalada Muqdisho.
Ku xigeenka madaxa Hay`adda ICRC Daniedl O,Malley ee soomaaliya ayaa sheegay in haweenay ka mid ah shaqaalahooda la afduubtay habeenkii xalay ahaa.
Haweeney u dhalatay dalka Jarmalka kana mid aheed shaqaalaha hay`adda ICRC ayaa la afduubtay xili ay ku sugneed xarunta Hay`adda ee ku taala aga gaarka isgoyska Soobe ee Muqdisho, iyadoona afduubkeeda la sheegay in ay ka dambeeyaan Kooxo aan la garanaynini.
Ilaalada Hay`adda ICRC ee magaalada Muqdisho ayaa ah kuwo Soomaali ah oo ka tirsan shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka qaabilsan, sida wararka qaar ay tilmaamaayaan.
“Waxaan ka walaacsannahay xaaladda iyo waliba badqabka gabadhi aan shaqo wadaagga aheen, waxa ey aheed Kalkaaliso caafimaad oo maalin walba ku hoowlanayd sidii ay ubaadbaadin lahayd naf khatar wajaheeysa” ayuu yidhi ku xigeenka madaxa howgalka gargaaarka Hay’adda ICRC ee soomaaliya.
Laamaha amaanka ee magaalada Muqdisho ayaa xalay gaadhay goobtii laga afduubtay haweeneydaas iyagoona halkaasi ka sameeyay baadhitaano la xidhiidha afduubka haweeneyda Ajaanibta ah ee la shaqaynaysay hay’addaasi.
Ra`iisul Wasaare Kheyre oo La kulmay Guddida Amaanka Midowga Yurub